Hafa sidina simulators
Flight Gear sidina simulator
FlightGear sidina simulator no open-source, freeware simulator nivoatra ny FlightGear Project. Ny famotsorana voalohany tao 1997, ary hatramin'izao nisy be dia be ny famotsorana.
Na dia eo aza ny maha freeware, FGFS dia tena tsara sy ny zava-misy simulator. Miaraka amin'ny simulator ny tena, ny zavatra hafa rehetra mifandray amin'ny izany maimaim-poana ihany koa ny maka, mampiasa sy hampivelatra bebe kokoa. Mba télécharger na raha te-hianatra bebe kokoa momba izany ianao, dia afaka manao izany amin'ny ofisialy FlightGear amin'ny Internet, www.flightgear.org .
Ny tena toerana mba maka isan-karazany fiaramanidina, mihoatra noho 400 azy, dia eto: github.com/FGMEMBERS .
Zavatra tsara momba izany dia tsy mila misoratra anarana mba télécharger ny fiaramanidina tianao.
Toerana manodidina dia azo alaina amin'ny fomba roa, ao amin'ny Internet, na amin'ny alalan'ny fampiasana ny rafitra ao anatin'ny TerraSync simulator. Koa, arakaraka ny hery ny PC, dia afaka misafidy ny toerana misy anao sy ny HD toerana tsara tarehy.
FlightGear koa ny manokana izany Multiplayer Network, nefa indrisy tsy mavitrika virtoaly Airlines, ary tsy misy fanohanana ny tambajotra solombavambahoaka lehibe toy ny VATSIM na IVAO.
Fotoana mamorona pejy: 0.111 segondra